maryland - Synonyms of maryland | Antonyms of maryland | Definition of maryland | Example of maryland | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for maryland
Top 30 analogous words or synonyms for maryland
စိုးသူ အနုပညာလောကမှ ခေတ္တ အနားယူပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Southern Maryland Hospital နှင့် Washington Hospital Center တို့တွင် ဆရာဝန် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်။
အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများကို ဖန်တီးရန် အစိုးရ Website များကို လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်အနည်းဆုံး ၁၆ခု ရှိပါတယ်။ Arizona , Askansas , California , Colorado , Delaware , Lowa , Lllinois , Maine , Maryland , Michigan , Minnesota , Montana , New York , Sourth Carolina , Texas , Utah နဲ့ Virgina တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ဆာဂေး ဘရင် ဆာဂေး ဘရင် ကို ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရှိ မော်စကိုမြို့တွင် ဂျူးလူမျိုး မိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အဖေ Michael ဘရင် မှာ Maryland တက္ကသိုလ် မှ သင်္ချာပါမောက္ခတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အမေ ယူဂျင်နီယားဘရင် မှာ NASA ရှိ Goddard Space Flight Center မှ သိပ္ပံပညာရှင်သုတေသီတဦး ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်လုံးသည် မော်စကိုတက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့ရခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။
Glam metal ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် US မှ တီးဝိုင်းအများစုသည် glam metal သို့ ဦးတည်လာကြသည်။ Westen Maryland မှ Kix သည် eponymous debut (၁၉၈၁) album ကို ထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။ San Francisco မှ Night Ranger ၏ Down Patrol (၁၉၈၂) album သည် US တွင် top 40 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၈၃ ခုနှစ် Midnight Madness top five single sister Christian ပါဝင်သည်။ Twisted Sister သည် glam rock တီးဝိုင်းသည် ၁၉၇၂ တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သူတို့၏ Under the Blade (၁၉၈၂) ပထမဆုံး album ကို ဖြန့်ချီခဲ့သည်။
ဟော်တင်ဟို ၂၂၉ လေယာဉ် A Horten H.IV flying wing glider is in the Planes of Fame museum in Chino, California. The only surviving Ho 229 airframe, the V3, is at the Smithsonian National Air and Space Museum's Paul E. Garber Restoration Facility in Suitland, Maryland. In December, 2011, the National Air and Space Museum had moved the Ho 229 into the active restoration area of the Garber Restoration Facility and is currently being reviewed for full restoration and display.
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း The first seven technicians arrived in the United States at New Castle Army Air Field, just south of Wilmington, Delaware, on September 20, 1945. They were then flown to Boston and taken by boat to the Army Intelligence Service post at Fort Strong in Boston Harbor. Later, with the exception of von Braun, the men were transferred to Aberdeen Proving Ground in Maryland to sort out the Peenemünde documents, enabling the scientists to continue their rocketry experiments.